ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ လိုအပ်နေကြောင်း ပြသနေတဲ့ ထိတ်လန့်စရာဓါတ်ပုံများ - Lifestyle Myanmar
Home General Knowledge ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ လိုအပ်နေကြောင်း ပြသနေတဲ့ ထိတ်လန့်စရာဓါတ်ပုံများ
ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ လိုအပ်နေကြောင်း ပြသနေတဲ့ ထိတ်လန့်စရာဓါတ်ပုံများ
ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုက ယခုအခါမှာ ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွက်၊ လူသားမျိုးနွယ်တွေအတွက် အကြီးမားဆုံးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများထဲက တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ နည်းပညာဆီကို ပိုပြီးရွေ့လျားနေကြသလို သဘာဝမိခင်ကြီးကနေ ပိုပြီးခွဲခွာခဲ့ကြပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု မြင့်တတ်လာခြင်းက စိုးရိမ်ဖွယ်ရာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်က ဓါတ်ပုံတွေက ကျွန်တော်တို့ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးရဲ့နိုင်ငံအချို့မှာ ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုတွေ ခံစားနေရတဲ့ ပုံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
၁။ လမ်းလုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေခြင်း
အထက်ပါပုံမှာ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်း အမှိုက်များစုစည်းနေတာကို ပြသထားတာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးက စိုးရိမ်ပူပန်မှုမြင့်တတ်လာခဲ့တဲ့အရာကို “Great Pacific garbage patch.”လို့ ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။ မြောက်ပိုင်းပစိဖိတ်ဒေသက သမုဒ္ဒရာညစ်ညမ်းမှုကို ဂြိုလ်တုတစ်ခုကနေဖမ်းယူရိုက်ကူးထားတာပါ။
၂။ အမှိုက်သရိုက်ကတစ်ဆင့် အသက်ရှုခြင်း
ဒါက အမှိုက်စွန့်ပစ်ခြင်းအတွက် ပုံမှန်အသုံးပြုနေကြတဲ့ ယမုံနာမြစ်ရဲ့ပုံတစ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကောင်လေးဟာ အမှိုက်တွေထဲကနေတစ်ဆင့် ကူးခတ်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ပုံပါ။
၃။ အမှိုက်တွေပြည့်နေတဲ့ သမုဒ္ဒရာ
ဒါက ကာရစ်ဘီယံ၏ အလွန်ညစ်ညမ်းနေတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုမြင်ရင် အားလုံးထဲမှာ ပလပ်စတစ်ကို ဘယ်တော့မှတီထွင်ခဲ့ဖို့ ကျွန်တော်တို့ ဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအမှိုက်တွေဟာ ဒေသခံ Montigua မြစ်ကနေ လာတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ Blue Planet အဖွဲ့အစည်းက မှတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။
၄။ နောက်ဆုံးတစ်ခုကို ထိန်းသိမ်းနေပုံ
ဒါက နောက်ဆုံးကျန်ခဲ့တဲ့ ရေခဲအပိုင်းတစ်ခုပေါ်က ပိုလာဝက်ဝံတစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူက အာတိတ်ဒေသမှာနေထိုင်ပြီး တခြားပိုလာဝက်ဝံတွေကဲ့သို့ ရေခဲအရည်ပျော်ကျခြင်း အကျပ်အတည်းကို ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ဒီအကျပ်အတည်းက ညစ်ညမ်းမှုနှင့် CO2 ထုတ်လွှတ်မှုအဆင့် တိုးလာခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုကြောင့် ဖြစ်ပျက်နေတာပါ။ ဒီမှာမွေး၊ ဒီမှာနေထိုင်ပြီး ဒီမှာသေဆုံးကြတာကြောင့် ပင်လယ်ရေခဲက သူတို့ရှင်သန်ဖို့အတွက် အလွန်အရေးပါပါတယ်။ ဒီအကျပ်အတည်းက အာတိတ်ဒေသရဲ့ 19ဒေသနီးပါး ထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။
red polluted water
ညစ်ညမ်းနေတဲ့ မြစ်တစ်ခုရဲ့ဒီဓါတ်ပုံဟာ 2011 ဒီဇင်ဘာ 13ရက်နေ့က ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ Henan ပြည်နယ်က Luoyang ရဲ့မြို့မှာ ရေနမူနာယူနေတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။ တရားမဝင်ဓါတုပစ္စည်းစက်ရုံ ၂ရုံက မိုးရေဆိုးပိုက်ထဲကို သူတို့ထုတ်လုပ်မှုစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေ စွန့်ပစ်ခြင်းပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။
၆။ ရေနံတွေ ရွဲရွဲစိုနေတဲ့ တိရိစ္ဆာန်များ
ငှက်တစ်ကောင် ပျော်ပျော်ကြီးရေချိုးနေတယ်လို့ မမှားလိုက်ပါနဲ့။ ဒါကငှက်တစ်ကောင်လို့တောင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်ရပါသလား? ဒါက ပင်လယ်ကွေ့အတွင်း ရေနံယိုဖိတ်မှုတွေထဲမှာ ပိတ်မိနေခဲ့ပေမယ့် ငှက်တစ်ကောင်ဟာ ၎င်းရဲ့ဆာလောင်မှုကို အငတ်ပြေစေဖို့ ရောက်လာတဲ့နေရာ Louisiana ကမ်းရိုးတန်းပေါ်က ရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။ ဒါက တိရိစ္ဆာန်တွေ၊ ငှက်တွေဟာ လူတွေရဲ့လုပ်ရပ်ကြောင့် ခံစားနေရတယ်ဆိုတာ ကြေကွဲဖွယ်တွေ့မြင်ရတာပါ။
ဒီပုံက ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် ညစ်ညမ်းမှုတွေကြောင့် နောက်အနှစ် 50ကျော်မှာ နစ်မြုပ်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပြီါ်ဖြစ်တဲ့ မော်လ်ဒိုက်ဖြစ်ပါတယ်။
၈။ အကူအညီမဲ့နေတဲ့ ပုံ
A child drinks water nearastream in Fuyuan county, Yunnan province March 20, 2009
ဒီပုံထဲက ကောင်လေးဟာ တစ်ခြားရွေးချယ်စရာမရှိလို့ ညစ်ညမ်းနေတဲ့ရေကို သောက်နေရတာပါ။ ဓါတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်ဟာ 2009ခုနှစ် မတ်လ 20ရက်နေ့ တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ်က ဖူယန်စမ်းချောင်းမှာ ဒီအဖြစ်အပျက်ကို တွေ့ကြုံခဲ့တာပါ။ စကားမစပ် မတ်လ22ရက်နေ့က ကမ္ဘာ့ရေသယံဇာတနေ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
a street covered by dense smog in Harbin, northern China, Monday, Oct. 21, 2013
ဒီမြင်ကွင်းက စိတ်ပျက်စရာကာင်းလှပါတယ်။ ဒါကတော့ နိုင်ငံတကာဘေးကင်းလုံခြုံမှုစံချိန်စံညွှန်းထက် လေထုညစ်ညမ်းမှုအဆင့် အဆ 40ပို မြင့်တင့်နေတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းထဲက မြို့တစ်မြို့ပုံကို ရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။ လူတွေဟာ အသက်ရှုဖို့ ရုန်းကန်နေခဲ့ကြပါတယ်။
၁၀။ အကြီးအကျယ် ဝမ်းနည်းစရာ
ဒါက Anhui ခရိုင်ရှိ Anqingမှာ စက္ကူစက်တစ်ခုကနေ ထွက်ရှိလာတဲ့ စွန့်ပစ်ရေဆိုးအမှိုက်တွေ အကြီးအကျယ် စီးဆင်းနေတဲ့ ယန်ဇီမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရေညစ်ညမ်းမှုက တစ်ချို့အချိန်တွေမှာ တရုတ်နိုင်ငံအတွက် စိုးရိမ်စရာကြီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
၁၁။ အမှိုက်တွေနဲ့ မဟာတံတိုင်း
ဒီပုံက ဆိုးဆိုးရွားရွား အမှိုက်တွေ ပြည့်နေတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံက မဟာတံတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ် ခုနှစ်ခုထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဒီမဟာတံတိုင်းက ယခု ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။ တင်းကျပ်တဲ့ စည်းကမ်းတစ်ချို့ နေရာတွေမှာထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဒါက ဟင်းသီးဟင်းရွက်အခင်းကြီး မဟုတ်ပါဘူး။ တရုတ်နိုင်ငံ Qingdao ကမ်းရိုးတမ်းပေါ်က ရေမျက်နှာပြင်မှာ ရေညှိတွေ ဖုံးလွှမ်းနေတာပါ။ ဒီပုံကို 2011မှာရိုက်ကူးခဲ့ပြီး သမုဒ္ဒရာတွေ၊ မြစ်တွေ နဲ့ ရေကန်လေးထဲမှာတောင် ရေညှိဖွဲ့စည်းမှု တိုးလာခြင်းကြောင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးအနှံ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် စိုးရိမ်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
၁၃။ ဒီပုံကို အိမ်မက်တစ်ခုမဟုတ်သလို မိုးတိမ်ပေါ်မှာ ရပ်နေတာလဲမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါက ထူထပ်တဲ့ အမြုပ်တွေနဲ့ ညစ်ညမ်းနေတဲ့ ယမုန်နာမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။
၁၃။ ညစ်ညမ်းမှုတွေ ပြည့်နေတဲ့ လက်တစ်စုံ
ဒီပုံက ငါးဖမ်းသမားတစ်ယောက်ဟာ မြစ်ထဲကနေ ရေညစ်ညမ်းမှုရဲ့ လက်တစ်ဆုပ်စာကို ကောက်ယူပြနေတဲ့နေရာ တရုတ်နိုင်ငံ Chaohu ရေကန်မှာ ရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။ ရေနေတိရိစ္ဆာန်တွေဟာ ဒီလိုအရာတွေကြောင့် ခံစားနေကြရပါတယ်။
၁၄။ သေဆုံးနေတဲ့ ငါးတွေ
ဒီပုံက ဘရာဇီးနိုင်ငံ ၊ Rio de Janeiroက Guanabara ပင်လယ်ရဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။ငါးတွေဟာ ရေညစ်ညမ်းမှုကြောင့် ဒီမှာသေဆုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။
၁၅။ ရေနံတွေ ရှင်းလင်းနေတဲ့ အလုပ်သမား
ဒီပုံက တရုတ်နိုင်ငံ Dalian ကရေနံယိုဖိတ်မှုတစ်ခုကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေတဲ့ အလုပ်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ရေနံပိုက်လိုင်းတစ်ခုက အဲ့ဒီမှာပေါက်ကွဲပြီး ရေနံယိုဖိတ်မှုတွေ ဖြစ်နေတာပါ။ အဆိုပါအဖြစ်အပျက်က 2010မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေနံပိုက်လိုင်း250နီးပါးပေါက်ကွဲခဲ့ပြီး ရေနံတွေဟာ စတုရန်းမိုင် 500ကျော် ဧရိယာအထိ ဖိတ်စင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီပုံတွေကို သင်ကြည့်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ တတ်နိုင်သမျှ လုပ်ပါ။သေးငယ်တဲ့အကျင့်လေးတောင်မှ ကြီးမားသော အပြောင်းအလဲတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးကို ကူညီဖို့ ကျွန်တော်တို့တစ်ယောက်ချင်းစီက ဘယ်အရာတွေကိုလုပ်နိုင်မယ်လို့ ထင်ပါသလဲ? သင့်ထင်မြင်ချက်တွေနှင့်အတူ မျှဝေပေးပါ။
ပတျဝနျးကငျြညဈညမျးမှုတှနေဲ့ပတျသတျပွီး တဈခုခုလုပျဖို့ လိုအပျနကွေောငျး ပွသနတေဲ့ ထိတျလနျ့စရာဓါတျပုံမြား
ပတျဝနျးကငျြ ညဈညမျးမှုက ယခုအခါမှာ ဆယျစုနှဈမြားစှာအတှကျ၊ လူသားမြိုးနှယျတှအေတှကျ အကွီးမားဆုံးစိုးရိမျပူပနျမှုမြားထဲက တဈခုဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ဟာ နညျးပညာဆီကို ပိုပွီးရှလြေ့ားနကွေသလို သဘာဝမိခငျကွီးကနေ ပိုပွီးခှဲခှာခဲ့ကွပါတယျ။ ကမ်ဘာကွီးပူနှေးလာမှု မွငျ့တတျလာခွငျးက စိုးရိမျဖှယျရာဖွဈပါတယျ။ အောကျက ဓါတျပုံတှကေ ကြှနျတျောတို့ ပိုငျဆိုငျတဲ့ ကမ်ဘာကွီးရဲ့နိုငျငံအခြို့မှာ ဝမျးနညျးဖှယျရာ ပတျဝနျးကငျြညဈညမျးမှုတှေ ခံစားနရေတဲ့ ပုံတှပေဲဖွဈပါတယျ။
၁။ လမျးလုပျဖို့ ကွိုးစားနခွေငျး
အထကျပါပုံမှာ ပစိဖိတျသမုဒ်ဒရာအတှငျး အမှိုကျမြားစုစညျးနတောကို ပွသထားတာဖွဈပါတယျ။ တဈကမ်ဘာလုံးက စိုးရိမျပူပနျမှုမွငျ့တတျလာခဲ့တဲ့အရာကို “Great Pacific garbage patch.”လို့ ချေါဝျေါခဲ့ကွပါတယျ။ မွောကျပိုငျးပစိဖိတျဒသေက သမုဒ်ဒရာညဈညမျးမှုကို ဂွိုလျတုတဈခုကနဖေမျးယူရိုကျကူးထားတာပါ။
၂။ အမှိုကျသရိုကျကတဈဆငျ့ အသကျရှုခွငျး
ဒါက အမှိုကျစှနျ့ပဈခွငျးအတှကျ ပုံမှနျအသုံးပွုနကွေတဲ့ ယမုံနာမွဈရဲ့ပုံတဈပုံဖွဈပါတယျ။ ဒီကောငျလေးဟာ အမှိုကျတှထေဲကနတေဈဆငျ့ ကူးခတျဖို့ ကွိုးစားနတေဲ့ပုံပါ။
၃။ အမှိုကျတှပွေညျ့နတေဲ့ သမုဒ်ဒရာ
ဒါက ကာရဈဘီယံ၏ အလှနျညဈညမျးနတေဲ့ အစိတျအပိုငျးတဈခုဖွဈပါတယျ။ ဒါကိုမွငျရငျ အားလုံးထဲမှာ ပလပျစတဈကို ဘယျတော့မှတီထှငျခဲ့ဖို့ ကြှနျတျောတို့ ဆန်ဒရှိမှာမဟုတျပါဘူး။ ဒီအမှိုကျတှဟော ဒသေခံ Montigua မွဈကနေ လာတာဖွဈကောငျးဖွဈနိုငျတယျလို့ Blue Planet အဖှဲ့အစညျးက မှတျခကျြခခြဲ့ပါတယျ။
၄။ နောကျဆုံးတဈခုကို ထိနျးသိမျးနပေုံ
ဒါက နောကျဆုံးကနျြခဲ့တဲ့ ရခေဲအပိုငျးတဈခုပျေါက ပိုလာဝကျဝံတဈကောငျဖွဈပါတယျ။ သူက အာတိတျဒသေမှာနထေိုငျပွီး တခွားပိုလာဝကျဝံတှကေဲ့သို့ ရခေဲအရညျပြျောကခြွငျး အကပျြအတညျးကို ရငျဆိုငျနရေပါတယျ။ ဒီအကပျြအတညျးက ညဈညမျးမှုနှငျ့ CO2 ထုတျလှတျမှုအဆငျ့ တိုးလာခွငျးကွောငျ့ ဖွဈပျေါလာတဲ့ အပူခြိနျပွောငျးလဲမှုကွောငျ့ ဖွဈပကျြနတောပါ။ ဒီမှာမှေး၊ ဒီမှာနထေိုငျပွီး ဒီမှာသဆေုံးကွတာကွောငျ့ ပငျလယျရခေဲက သူတို့ရှငျသနျဖို့အတှကျ အလှနျအရေးပါပါတယျ။ ဒီအကပျြအတညျးက အာတိတျဒသေရဲ့ 19ဒသေနီးပါး ထိခိုကျခဲ့ပါတယျ။
ညဈညမျးနတေဲ့ မွဈတဈခုရဲ့ဒီဓါတျပုံဟာ 2011 ဒီဇငျဘာ 13ရကျနကေ့ ရိုကျကူးခဲ့တဲ့ တရုတျနိုငျငံ Henan ပွညျနယျက Luoyang ရဲ့မွို့မှာ ရနေမူနာယူနတေဲ့ပုံဖွဈပါတယျ။ တရားမဝငျဓါတုပစ်စညျးစကျရုံ ၂ရုံက မိုးရဆေိုးပိုကျထဲကို သူတို့ထုတျလုပျမှုစှနျ့ပဈပစ်စညျးတှေ စှနျ့ပဈခွငျးပွုလုပျခဲ့ကွတာပါ။
၆။ ရနေံတှေ ရှဲရှဲစိုနတေဲ့ တိရိစ်ဆာနျမြား
ငှကျတဈကောငျ ပြျောပြျောကွီးရခြေိုးနတေယျလို့ မမှားလိုကျပါနဲ့။ ဒါကငှကျတဈကောငျလို့တောငျ ရှငျးရှငျးလငျးလငျး မွငျရပါသလား? ဒါက ပငျလယျကှအေ့တှငျး ရနေံယိုဖိတျမှုတှထေဲမှာ ပိတျမိနခေဲ့ပမေယျ့ ငှကျတဈကောငျဟာ ၎င်းငျးရဲ့ဆာလောငျမှုကို အငတျပွစေဖေို့ ရောကျလာတဲ့နရော Louisiana ကမျးရိုးတနျးပျေါက ရိုကျကူးခဲ့တာပါ။ ဒါက တိရိစ်ဆာနျတှေ၊ ငှကျတှဟော လူတှရေဲ့လုပျရပျကွောငျ့ ခံစားနရေတယျဆိုတာ ကွကှေဲဖှယျတှမွေ့ငျရတာပါ။
ဒီပုံက ရာသီဥတုပွောငျးလဲမှုနှငျ့ ညဈညမျးမှုတှကွေောငျ့ နောကျအနှဈ 50ကြျောမှာ နဈမွုပျမယျလို့ ခနျ့မှနျးထားပျွီါဖွဈတဲ့ မျောလျဒိုကျဖွဈပါတယျ။
၈။ အကူအညီမဲ့နတေဲ့ ပုံ
ဒီပုံထဲက ကောငျလေးဟာ တဈခွားရှေးခယျြစရာမရှိလို့ ညဈညမျးနတေဲ့ရကေို သောကျနရေတာပါ။ ဓါတျပုံဆရာတဈယောကျဟာ 2009ခုနှဈ မတျလ 20ရကျနေ့ တရုတျနိုငျငံ ယူနနျပွညျနယျက ဖူယနျစမျးခြောငျးမှာ ဒီအဖွဈအပကျြကို တှကွေုံ့ခဲ့တာပါ။ စကားမစပျ မတျလ22ရကျနကေ့ ကမ်ဘာ့ရသေယံဇာတနဖွေ့ဈခဲ့ပါတယျ။
ဒီမွငျကှငျးက စိတျပကျြစရာကာငျးလှပါတယျ။ ဒါကတော့ နိုငျငံတကာဘေးကငျးလုံခွုံမှုစံခြိနျစံညှနျးထကျ လထေုညဈညမျးမှုအဆငျ့ အဆ 40ပို မွငျ့တငျ့နတေဲ့ တရုတျနိုငျငံမွောကျပိုငျးထဲက မွို့တဈမွို့ပုံကို ရိုကျကူးခဲ့တာပါ။ လူတှဟော အသကျရှုဖို့ ရုနျးကနျနခေဲ့ကွပါတယျ။
၁၀။ အကွီးအကယျြ ဝမျးနညျးစရာ
ဒါက Anhui ခရိုငျရှိ Anqingမှာ စက်ကူစကျတဈခုကနေ ထှကျရှိလာတဲ့ စှနျ့ပဈရဆေိုးအမှိုကျတှေ အကွီးအကယျြ စီးဆငျးနတေဲ့ ယနျဇီမွဈဖွဈပါတယျ။ ရညေဈညမျးမှုက တဈခြို့အခြိနျတှမှော တရုတျနိုငျငံအတှကျ စိုးရိမျစရာကွီးတဈခုဖွဈခဲ့ပါတယျ။
၁၁။ အမှိုကျတှနေဲ့ မဟာတံတိုငျး
ဒီပုံက ဆိုးဆိုးရှားရှား အမှိုကျတှေ ပွညျ့နတေဲ့ တရုတျနျိုငျငံက မဟာတံတိုငျးဖွဈပါတယျ။ ကမ်ဘာ့အံ့ဖှယျ ခုနှဈခုထဲက တဈခုဖွဈတဲ့ ဒီမဟာတံတိုငျးက ယခု ပွနျလညျထိနျးသိမျးဖို့ လိုအပျနပေါပွီ။ တငျးကပျြတဲ့ စညျးကမျးတဈခြို့ နရောတှမှောထားဖို့ လိုအပျပါတယျ။
ဒါက ဟငျးသီးဟငျးရှကျအခငျးကွီး မဟုတျပါဘူး။ တရုတျနိုငျငံ Qingdao ကမျးရိုးတမျးပျေါက ရမေကျြနှာပွငျမှာ ရညှေိတှေ ဖုံးလှမျးနတောပါ။ ဒီပုံကို 2011မှာရိုကျကူးခဲ့ပွီး သမုဒ်ဒရာတှေ၊ မွဈတှေ နဲ့ ရကေနျလေးထဲမှာတောငျ ရညှေိဖှဲ့စညျးမှု တိုးလာခွငျးကွောငျ့ တဈကမ်ဘာလုံးအနှံ့ ပတျဝနျးကငျြထိနျးသိမျးရေးအတှကျ စိုးရိမျစရာဖွဈခဲ့ပါတယျ။
၁၃။ ဒီပုံကို အိမျမကျတဈခုမဟုတျသလို မိုးတိမျပျေါမှာ ရပျနတောလဲမဟုတျပါဘူး။ ဒါက ထူထပျတဲ့ အမွုပျတှနေဲ့ ညဈညမျးနတေဲ့ ယမုနျနာမွဈဖွဈပါတယျ။
၁၃။ ညဈညမျးမှုတှေ ပွညျ့နတေဲ့ လကျတဈစုံ
ဒီပုံက ငါးဖမျးသမားတဈယောကျဟာ မွဈထဲကနေ ရညေဈညမျးမှုရဲ့ လကျတဈဆုပျစာကို ကောကျယူပွနတေဲ့နရော တရုတျနျိုငျငံ Chaohu ရကေနျမှာ ရိုကျကူးခဲ့တာပါ။ ရနေတေိရိစ်ဆာနျတှဟော ဒီလိုအရာတှကွေောငျ့ ခံစားနကွေရပါတယျ။
၁၄။ သဆေုံးနတေဲ့ ငါးတှေ
ဒီပုံက ဘရာဇီးနိုငျငံ ၊ Rio de Janeiroက Guanabara ပငျလယျရဲ့ပုံဖွဈပါတယျ။ငါးတှဟော ရညေဈညမျးမှုကွောငျ့ ဒီမှာသဆေုံးနတောဖွဈပါတယျ။
၁၅။ ရနေံတှေ ရှငျးလငျးနတေဲ့ အလုပျသမား
ဒီပုံက တရုတျနိုငျငံ Dalian ကရနေံယိုဖိတျမှုတဈခုကို သနျ့ရှငျးရေးလုပျနတေဲ့ အလုပျသမားတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ ရနေံပိုကျလိုငျးတဈခုက အဲ့ဒီမှာပေါကျကှဲပွီး ရနေံယိုဖိတျမှုတှေ ဖွဈနတောပါ။ အဆိုပါအဖွဈအပကျြက 2010မှာ ဖွဈပါတယျ။ ရနေံပိုကျလိုငျး250နီးပါးပေါကျကှဲခဲ့ပွီး ရနေံတှဟော စတုရနျးမိုငျ 500ကြျော ဧရိယာအထိ ဖိတျစငျခဲ့ပါတယျ။
ဒီပုံတှကေို သငျကွညျ့ပွီး ပတျဝနျးကငျြကာကှယျစောငျ့ရှောကျဖို့ တတျနိုငျသမြှ လုပျပါ။သေးငယျတဲ့အကငျြ့လေးတောငျမှ ကွီးမားသော အပွောငျးအလဲတှကေို ဖွဈပျေါစနေိုငျပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ကမ်ဘာမွကွေီးကို ကူညီဖို့ ကြှနျတျောတို့တဈယောကျခငျြးစီက ဘယျအရာတှကေိုလုပျနိုငျမယျလို့ ထငျပါသလဲ? သငျ့ထငျမွငျခကျြတှနှေငျ့အတူ မြှဝပေေးပါ။
Previous articleနိုင်ငံတကာကဆောက်လုပ်ထားတဲ့ ရင်သပ်ရှူမောဖွယ် ရုပ်ထုကြီးများ
Next articleဆယ်ကျော်သက်အရွယ်နဲ့ ရင့်ကျက်သွားတဲ့အချိန် ဘာတွေ ကွာခြားသွားပြီလဲ။